HR Manager | PRO 1 Myanmar Co., Ltd. ﻿
22.8.2019, Full time , Trading
•	Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
•	Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results
•	Minimum5years’ of relevant professional experience in human resources and in similar position.
•	Bachelor’s degree isamust and other diploma or qualifications in Business
•	The ability to work under pressure and with personnel from all levels
•	Good knowledge in HR software
•	Strong command of written and verbal English
•	Should have good interpersonal skills and be able to communicate well with all levels of staff.
•	age 35-45
Work location No.76, Lanthit Street, Near Arleing Ngar Sint Pagoda, Yangon
•	To do number customer report by daily and send to Marketing Head Office •	To do promotion report to Marketing Head Office (Number of gift in promotion usage) Other assignment •	To support branch when havealocal store event ,activity or store decoration •	To get requirement about marketing materials and other support need from branch manager •	To co-ordinate supplier road show area to branch manager and monitor supplier roadshow display to marketing head office
99 Days, Full time , Trading
•	ရေရှည် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ရမည်။ •	လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်သမားရုံး၊ HR အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော သက်ဆိုင်ရာ ရုံးများသို့ သွာ� ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Senior Sales Assistant (Zin Htet Cement & Building Materials Wholesales )
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ရမည်။ Sales Assistant (Zin Htet Cement & Building Materials Wholesales )
• Excellent communication Skills, Team work skills. • Strong understanding of accounting theory For Zin Htet - Cement & Building Materials Wholesales Accountant Assistant -For Zin Htet
•	Online marketing လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
•	အရောင်းပိုင်း စိတ်ဝင်စားပြီး ရိုးသားကြိုးစား၍ သွက်လက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	To create promotion campaign idea and select product to do promotion •	To do action plan of promotion •	To control and manage FOC item for promotion •	To share and brief an idea of marketing material to graphic design team such as flyer, banner, standee. •	To deploy marketing material and company FOC items to branch with control and estimate usage quantity. •	To evaluate promotion campaign performance and report to management. •	To control budget. •	To create store decoration idea in festival and traditional season. � ...
o	သွက်လက်ချက်ချာပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။ •	စာရင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်း၍ဖြတ်လက်သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။
•	ကျား/မ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများရောင်းခြင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများရောင်းသောဆိုင်တွင် လုပ်ဖူးခြင်းအတွေ့အကြုံရှိပါက ဦးစားပေးမည်။ ...
102 Days, Full time , Trading
•	မိမိစီမံခန့်ခွဲသည့်အရောင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် •	လူအများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရ ...
Sales - 10 Post ( East Dagon)
•	အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီး ရိုးသားကြိုးစား၍ သွက်လက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။စိတ်ရှည်ပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အရှေ့ ဒဂုံ နှင့် နီးသူများလျှောက်ထ� ...
•	Electrical& Lighting လျှပ်စစ်မီးပစ္စည်းများအတွက် PRO 1 GLOBAL CO.,LTD. တွင် Brand Promotor အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူရသောအမှတ်တံဆိပ်၏ ထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်သူများအား ရှင်းလင်းပြနိုင်ရမည်။ •	Brand Promoter အတွေ့အကြုံရှိသူ (သို့) လ ...
103 Days, Full time , Trading
•	Microsoft word,Excel သုံးစွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Computer,Internet & Email သုံးစွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ရမည်။ •	လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်� ...
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်း၍ဖြတ်လက်သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (၂)ဆိုင်းဖြင့်အလှည့်ကျဆင်းနိုင်ရမည် •	အ� ...
•	Should have experience (Network, CCTV, PABX,PA,Printer,Computer) •	Network, CCTV, PABX, Printer, Computer နှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံရှိရမည် •	Able to travel long time & any where/any time •	မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည့်သည့်နေရာ ဒေသမဆို အချိန်မရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် •	Wrok with full responsiblilty and must be ethic •	ရိုးသ� ...
• Construction Site များ၏ Temporary M&E facilities များကို တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ • Electrical & Mechanical ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Preventive Maintenance ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များအား ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
107 Days, Full time , Trading
•	Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. •	Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results •	Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မြို့တွင်း ရုံးခွဲနှင့် နယ်ရုံးခွဲများသို့လည်း သွားရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ရမည်� ...
HR Manager HR, Training & Recruitment Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon PRO 1 Myanmar Co., Ltd. HR,Training & Recruitment jobs HR,Training & Recruitment jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
AUNG EMERALD CO.,LTD